Togo: Fiatoana Kely Taorian'ny Dimy Herinandro Nisian'ny Hetsi-panoheran'ny Mpianatra
Afrika Mainty17 Jolay 2011
Ny tolon'ireo mpianatra avy any Togo, firenena Afrikana Tandrefana, ny mba hanatsaràna ny fepetram-panabeazana dia efa nahatratra ny herinandro faha-diminy ary na eo aza ny fitsaharana kely tato ho ato, mbola avo ny fihenjanana any Lomé renivohitra.Ao anatin'izany ny fampiakarana sy fandoavana ny vatsi-pianaran'izy ireo.
Azia Atsinanana17 Jolay 2011
Maraoka:Mitohy ny Fihetsiketsehana Manohitra ny Fanovana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Jolay 2011
Tamin'ny Zoma 8 jiona 2011, nandatsa-bato tamin'ny fitsapakevi-bahoaka ny vahoaka Maraokana tamin'ny volavolan-dalampanorenana naroson'ny Mpanjaka Mohammed VI. Mampiseho ny fanohanana goavana ny fanovana ny valim-pifidianana ofisialy, izay 98 isan-jato no nisafidy ny ‘Eny’ avokoa. Nitaky ny fametrahana ny fitondram-panjaka parlemantera ahitana fisaraham-pahefana mangarahara tanteraka ny mpanao fihetsiketsehana ho amin'ny demokrasia. Amin'ny...
Mozambika: Ilay Kitapo Hiadiana Amin'ny Fahantràna Niteraka Resabe
Afrika Mainty06 Jolay 2011
Ao Mozambika, niteraka fifandroritan-kevitra teo amin'ny samy olom-pirenena ny iray amin'ireo fepetra naroson'ny governemanta mba hanamaivanana ny fiantraikan'ny sondrom-bidim-piainana amin'ny vahoaka. Na betsaka aza ny fanantenàna, dia nambàra ny “fanafoanana” io Kitapo misy ny Filàna Fototra io ny 16 Jona.
Rosia: Ireo Hagaigen'ny Ministera Tao Amin'ny Aterineto
Eoropa Afovoany & Atsinanana03 Jolay 2011
Ny Ministera Rosiana misahana ny Raharaham-Bahiny (MVD) dia vao avy nanomboka fanentanana tao amin'ny Aterineto ary tato anatin'ny tapa-bolana dia hetsika goavana roa no nahasarika ny saina tamin'ireo hetsika nataon'ny Ministera.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Jolay 2011
Nandeha nandatsa-bato tamin'ny fitsapakevim-bahoaka ny mponina Maraokanina androany mba hifidy ny lalam-panorenana vaovao natolotry ny Mpanjaka Mohammed VI. Na dia nankatoavin'ireo mpanadihady marobe sy mpakasitraka ny mpanjaka tokana aza ny fanovana natao, dia tsy namaly ny hetahetan'ny mpanao politika sy ny mpitolona izay niandrandra demokrasia tena izy, ahitana fisaraham-pahefana sy fiafaran'ny...
Armenia:Mangataka Ny Hanatsaharana Ny Famonoana Ny Alika Mpirenireny Ireo Mafana Fo Mpiaro Biby
Azia Afovoany sy Kaokazy01 Jolay 2011
Fampiasana ireo fitaovam-pifaneraserana ara-tsosialy tsy mbola fahita no notontosan'ireo mafàna fo mpiaro biby any Kaokazy Atsimo andro vitsivitsy lasa izay, tamin'ny fangatahan'izy ireo ny hanatsaharana tsy misy hatak'andro ny famonoana miharo habibiana mianjady ny alika mpirenireny tamin'ny alalan'ny fanesehana fangatahana sy antso tao amin'ny pejy Facebook-n'i Karen Karapetyan ben'ny tanànan'i...